के तपाई जागिरको खोजिमा हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने यी बैंकमा खुलेका छन जागिरको यती धेरै अवसर
July 3, 2019 July 3, 2019 by साहारा संदेश
असार १८ काठमाडौं।के तपाई जागिरको खोजिमा हुनुहुन्छ ? यदि तपाईसँग योग्यता छ भने बैंकमा ठुलो परिणाममा जागिरको लागि आवेदन खुलेको छ।सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड र हिमालयन बैंक लिमिटेडमा २५५ जनालाई जागिरको अवसर खुलेको छ ।
हिमालयन बैंक लिमिटेडमा ८६ जनालाई जागिरको अवसर खुलेको हो । बैंकले ४३ जना सुपरभाइजर र ४३ जना जुनियर असिस्टेण्ड माग गरेको छ ।
४२ सुपरभाइजका लागि फाइनान्स, बैंकिङ र इकोनोमिक्समा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण तथा १ जना अर्का सुपरभाइजरका लागि एलएलबी उत्तीर्ण गरेको तथा ३५ वर्ष न नाघेको हुनु पर्नेछ ।
यता,सञ्चुरी कमर्सियल बैंकले १ जना डेपुटी म्यानेजर, १ जना असिस्टेण्ड म्यानेजर, १ जना अफिसर, १ जना असिस्टेण्ट अफिसर, १ जना सुपरभाइजर, ३ जना सिनियर असिस्टेण्ट, १ जना सिनियर असिस्टेण्ड(आईटी सिस्टम), म्यानेजमेन्ट ट्रेनी ३० जना, ५ जना जुनियर असिस्टेण्ट(आइटी डिपार्टमेन्ट) र १२५ जना ट्रेनी असिस्टेण्ट गरी १६९ जना कर्मचारी माग गरेको हो । बैंकले माग गरेको आवश्यक योग्यता पूरा गरेका इच्छुक उम्मेदवारहरुले साउन १ गते भित्र आवेदन दिन सक्ने जनाइएको छ ।
त्यस्तै जनता बैंकले पनि २ सय जना कर्मचारी माग गरेको छ । म्यानेजमेन्ट ट्रेनी पदमा ५० जना र जुनियर असिस्टेन्टका लागि १५० जना कर्मचारी माग गरेको हो । योग्यता पुगेका इच्छुकहरुले साउन १ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
Prevपुरा भयो स्वर्गीय पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको एउटा सपना (फोटो सहित)
Nextदाइजो माग्न ससुराली पुगेका ज्वाइ रुखमा बाँधेर कुटिए